के मतदान केन्द्रहरू अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री छन् ? | Chitrawan Khabar
के मतदान केन्द्रहरू अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री छन् ?
काठमाडौँ । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सजिलै मतदानस्थलसम्म जाने वातावारण मिलाइदिन अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकहरूले माग गरेका छन् । यसपालीको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ५ लाखभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति र २१ लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले मतदान गर्दैछन् । शारीरिक रूपमा अशक्त जुम्लाका दीलबहादुर रावतले आफूले सजिलै मतदान गर्न पाउनुपर्ने अधिकार भए पनि त्यसो हुनेमा विश्वस्त नभएको विचार राख्नुभयो ।
अघिल्लो निर्वाचनमा पनि ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि अलग्गै मतदानस्थल थिएन । मतदानको समयमा प्राथमिकता भने दिइएको थियो । राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घका पूर्व सचिव टीका दाहालले मतदान केन्द्रहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मैत्री बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले भने यसपटक ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै विशेष व्यवस्था गर्ने दावी गरेको छ । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले देशभरका मतदान केन्द्रलाई अपाङ्गतामैत्री तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
आफ्नो पक्षमा मतदान गर्नका लागि भन्दै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदान स्थलमा लगिदिने तर घरसम्म नपु¥याइदिने गर्दा हुने सम्स्यालाई ध्यानमा राखेर यसपटक विशेष व्यवस्था गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ । तर आयोगले भने अनुसारले काम हुनेमा सरोकारवालाले शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन् ।